PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-10 - AKA SIZOVEZWA KUGU FEST
AKA SIZOVEZWA KUGU FEST
Ilanga langeSonto - 2017-09-10 - Ezikaqedisizungu -
ophinde abe nguphrojusa ohlonishwayo ethailand, unonthakorn Thaweesua, abe khona.
Ngonyaka odlule uthaweeusa ukhombise ngefilimu yakhe, i-ongbak, ethandwe kakhulu kanti ufike wathanda nosikompilo lwamazulu kangangokuba yena nozindela benza ifilimu ezokhuluma ngokubulawa kobhejane ezobizwa ngokuthi yireg Cargo.
“Sisayinde isivumelwano sokusebenzisana ngonyaka odlule ngesikhathi kunalo mcimbi. Sesiqalile ukuqopha leyo filimu ngokubambisana. Kuzokhonjiswa nangefilimu yakhe lo mqondisi ethi Bad Genius,” kusho yena.
Mhla zingama-22 no-23 kuzoba nezingqungquthela lapho intsha enothando lokungena kulo mkhakha izothola ithuba lokufunda kabanzi ngawo.
Umqondisi osezakhele igama kuleli naphesheya, u-akin Omotoso uzokhombisa ngefilimu yakhe entsha i-buyer.
Ngomhlaka 24 kuzoba nomcimbi wokuvalwa uzindela awenza ngokubambisana nomqondisi nomlingisi, uthapelo Mokoena, ozoba solwandle est Michaels lapho kuzophinde kunikezelwe nezindondo kulabo abazobe bengenele ngamafilimu ahlukene.